Olee otú Tinye Metadata ka iTunes Library Mfe
> Resource> iTunes> Olee Otú M Pụrụ Easily na-akpaghị aka Tinye Metadata na iTunes
Metadata maka music agụnye album aha, ọgụ egwu, track aha, album nkà na ndị ọzọ na-akọwapụta iberibe ọmụma banyere a music faịlụ. Ọ bụrụ na ị dọwara ọtụtụ songs si CD ka iTunes ma ọ bụ tinye iTunes n'ọbá akwụkwọ ọtụtụ songs, nke e dere site video ma ọ bụ ọdịyo saịtị, Ohere inweta bụ ị pụrụ inwe ọtụtụ faịlụ na-efu ọmụma ma ọ bụ na-ekwesịghị ịdị ozi dị ka "Track 01" ma ọ bụ "Unknown Artist".
Ebe ọ bụ na metadata mkpa a otutu na-edebe gị iTunes n'ọbá akwụkwọ dozie, ọ bụ mkpa n'ihi na ị na-ahụ oké ngwá ọrụ idozi niile songs mfe. Echegbula. Lee dịghị ihe ọzọ na-ahụ ebe a oké nhọrọ aka-na Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic). Ọ na-akpaghị aka okụt niile ozi maka songs gị iTunes Ọbá akwụkwọ na-enye gị ohere embed ozi na songs ka e wee egosipụta na gị na obere ngwaọrụ. Ka ego otú iji ya n'okpuru.
1 Mwepụta TidyMyMusic na-akpaghị aka mbubata gị iTunes n'ọbá akwụkwọ
Download na wụnye TidyMyMusic na gị Mac. Mgbe ị na-emeghe ya, ọ ga na-akpaghị aka iṅomi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ mbubata niile music na faịlụ tree n'okpuru idozi iTunes. Na programmụ a ga-eme scanning oge ọ bụla ị na-re-imeghe ya.
2 Chọta metadata nile songs na iTunes
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ metadata n'ihi na otutu songs, dị nnọọ gaa nkụnye eji isi mee nke usoro ihe omume. Tinye akà rà checkbox nke Chọọ maka unidentified Songs na pịa iṅomi button, mgbe ahụ, a usoro ga-amalite chọta metadata nile songs gị iTunes n'ọbá akwụkwọ.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ manụ duplicates gị iTunes n'ọbá akwụkwọ, dị nnọọ ego igbe nke Chọọ maka duplicated songs na pịa iṅomi bọtịnụ. Mgbe ha niile duplicates na-achọta, i nwere ike ikpebi nke na otu onye ka ihichapụ site onwe gị.
3 Tinye metadata niile iTunes music
Họrọ otu song na-ahụ ya hụrụ ọmụma na nri n'igbe. Wee pịa Mee bọtịnụ na ala ka embed metadata ka music faịlụ.
Cheta na: Ị nwere ike ịgbanwe metadata ọzọ mgbe n'itinye. Pịa Dezie icon na nri n'igbe ahụ jupụta na edezi ubi na ihe bụ ihe n'uche gị. Na-apụghị mfe.
Rịba ama na metadata na-agbakwunyere na music faịlụ otú i nwere ike ịnyefe na-egosipụta na ha na gị obere ngwaọrụ dị ka iPod ma ọ bụ iPhone. Ike na-eche ka a na-agbalị? Dị nnọọ ibudata ya na-enye ya a laa na ị dịghị mgbe a ga ka ala.
Ebe a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ nkuzi: